मेलिना राई र निशान भट्टराईको स्वरमा नयाँ गित ( भिडियो सहित ) – Manakamana Media
Home / भिडियो / मेलिना राई र निशान भट्टराईको स्वरमा नयाँ गित ( भिडियो सहित )
मेलिना राई र निशान भट्टराईको स्वरमा नयाँ गित ( भिडियो सहित )
Manakamana Media April 10, 2019	भिडियो Leaveacomment 190 Views
अभिनेत्री प्रियंका कार्की र अभिनेता आयुष्मान देशराज जोशीको मुख्य अभिनय रहेको फिल्म ‘प्रेम दिवस’मा समावेश भएको ‘बरु अर्को जुनी’ गीत सार्वजनिक भएको छ ।
गीतमा मेलिना राई र निशान भट्टराई को स्वर, शान्ति प्रियको शब्द, कविराज गहतराजको कोरियोग्राफी रहेको छ । गीतमा आयुष्मान र प्रियंका फिचर्ड छन् । यहि जोडीको गीत ‘अर्को जुनी’ केही समय अघि सार्वजनिक भएको थियो ।
म्युजिकल लभ स्टोरी समेटिएको फिल्ममा प्रियंका कार्की, आयुष्मन देशराज जोशी, नव-नायक विशाल खरेल लगायतको मुख्य भूमिका रहेको छ । प्रदीप भारद्वाजको कथा, पटकथा तथा संवाद रहेको फिल्ममा महाराजा थापा, महेश खड्का, बसन्त सापकोटा, करण सिंह कार्की र दीपक शर्माको संगीत रहेको छ।
कविराज गहतराजको कोरियोग्राफी, मानकृष्ण महर्जनको छायांकन, रोशन श्रेष्ठले द्वन्द्व निर्देशन, बनिष शाहको सम्पादन रहेको छ । फिल्म रियल मोसन पिक्चर्स प्रालीको ब्यानरमा सञ्जय न्यौपानेको निर्माण तथा योगेश घिमिरेको निर्देशनमा तयार भएको हो ।
Previous तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा बिरामी, दिल्ली अस्पतालमा भर्ना
Next सरकारले प्रतिवन्ध लगाएपछि अाक्रमक बन्दै गएकाे विद्राेहि नेकपाक भाेजपुर
गायीका सुनितामी परियार को तीज कोसेली बाबरी (भिडियो सहित )
गायीका सुनितामी परियार को तीज कोसेली बाबरी
रौतहटको राजु तामाङ मलेसियामा रातारात भाइरल भिडियो सहित
सन्जिब ठकुरी र लक्ष्मी दर्नालको अभिनयमा “काले गुण्डा” सार्वजनिक (भिडियो सहित)
अमीत रोकाय र प्रीया लामको नया गीत हजार जन्म” सार्वजनिक… (भिडियो सहित)
शम्भु राईले प्रकाश सपुत लाई गलबन्दी”डिमाण्ड लाई ! अब म छोडदिन(हेर्नुहोस भिडियो)
शम्भु राईले प्रकाश सपुतलाई गलबन्दी”डिमाण्ड लाई ! अब म छोडदिन(हेर्नुहोस भिडियो) काठमाडौँ, प्रकाश सपुतको गित …